AI - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Zvinofungidzirwa kuti mumakore gumi aya akawanda e data nyowani haazogadzirwa nevanhu, asi nema sensors uye nehungwaru, akaiswa midziyo akabatana neinternet-smartphones, marobhoti, maMRI scanners, smart magetsi grids uye anorema maindasitiri masisitimu. .
AI kunyorera mu zvikamu zvakasiyana
AI kunyorera kwakakura mune angangoita ese chikamu kungave kwehutano, dzidzo, bhizinesi, mari, mutemo kana kugadzira. Muchikamu chekuchengetedza hutano, mafemu ari kushandisa muchina kudzidza kuita nekukurumidza uye zvirinani kuongororwa kupfuura vanhu. Sa IBM Watson, ndiwo muenzaniso unonyanya kuzivikanwa weAI mubazi rezvehutano, unonzwisisa mutauro wevanhu uye unoshanda pakupindura mibvunzo yakabvunzwa nezvayo. Iyo sisitimu inotsvaga yemurwere dhata mune dhatabhesi kuti iumbe dzidziso iyo iyo iyo ipapo iyo inopa pamberi pevanhu Kubhejera kukuru kweAI kuri pakuderedza mutengo uye kugadzirisa mhedzisiro yevarwere. Chatbots, mumwe muenzaniso weAI, chirongwa chekombuta chinobatsira vatengi nekupindura mibvunzo yavo, kuvabatsira kuburikidza nehurongwa hwekubhadharisa uye kuvabatsira kuronga yavo yekuteedzera-kugadzwa Muchikamu chedzidzo, AI inogona kutsiva vadzidzisi, nekuchinja zvachose nzira dzinodzidziswa nevadzidzi, kuvabatsira kudzidza nekunzwisisa panguva yavo yega. Otomatiki grading uye mhedzisiro mhedzisiro inzvimbo shoma apo AI yaizonyatso batsira.
Mumabhizinesi, kushandira zvirinani vatengi, michina yekudzidza algorithms iri kubatanidzwa mune analytics uye CRM mapuratifomu ekuratidza iyo data. Chatbots akave akaverengerwa mukati mawebhusaiti kuti ape rubatsiro nekukurumidza kune vashandisi. Mumutemo, otomatiki aigona kuchengetedza nguva nesimba mukutsvaga kwekutsvagisa magwaro, izvo zvinowedzera tiry kune vanhu. Iyo dhatabhesi ingangove yakashongedzerwa neiyo taxonomy uye ontology iyo yaizobatsira kutanga kutanga kuvaka mibvunzo-uye-mhinduro makomputa vabatsiri uye ichave yakarongedzwa kupindura. Iwo marobhoti angave ari kumberi kana zvasvika kune yekugadzira chikamu.
Munzvimbo zhinji dzemutemo nehupfumi, kukanganisa kweAI kwave kubatsira sekuvimbika, kuongorora, kutonga uye chengetedzo. AI AI system yaizonyura mukati mehupenyu hwedu kungave kuri kudzora pacemaker yako, mota yako kana otomatiki ekutengesa system kana yako magetsi gridhi. Uye tingaite chero chatinoda kuti chiitwe. Asi pane zvakare chinhu chechengetedzo kana zvasvika pakushandisa AI uye otomatiki chinenge chero chinhu chatinoshandisa kana chatinoona. Kudzivirira nhangemutange yemaoko inoparadza muzvombo zvekuzvimiririra ndeimwe yeavo uye pachinzvimbo, mubvunzo mukuru ndewokuti kana iyo AI system ikava nenjere kupfuura vanhu pane ese mabasa ekuziva? Izvo zvinogona kuisa njodzi huru kurudzi rwevanhu nekuti zvaizodzokorodza-kugadzirisa, zvichikonzera kuputika kwehungwaru kuchisiya huchenjeri hwevanhu kumashure zvakanyanya. Sisitimu yakadaro inogona kubatsira kupedza hurombo, chirwere nehondo nekugadzira matekinoroji matsva angave akachenjera kwazvo. Asi vashoma nyanzvi vanewo manzwiro ekuti vanogona kuve nemhedzisiro yakaipa mune ramangwana. Artificial intelligence system inogona kuita nemaune kana kusaziva kuita kukuvadza kukuru kunze kwekunge isu tikadzidza kuenzanisa zvinangwa zveAI nezvedu.
AI ichave iri nyowani nzira isu yekudyidzana nemagadget edu ese; mota dzedu, mafiriji, mafoni, gonhi repamberi nepakati kupisa system. Tingave tichigara mune inogara-pane nyika. Kugadzira edu emidziyo kufanotaura zvatinoda uye kunzwisisa mamiriro edu azvino maitiro ndiyo nzira yekuvaka zvigadzirwa zvakaomarara. Bhiriyoni yakabatana 'zvinhu' izvozvi zviri kushingairira kukumbira rutsigiro kubva kuAI mapuratifomu.